वैशाखमा बिहे गर्नेले धेरै जन्ती लान नपाइने , सरकारले ल्यायो यस्तो नियम ! तोक्यो संख्या – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/वैशाखमा बिहे गर्नेले धेरै जन्ती लान नपाइने , सरकारले ल्यायो यस्तो नियम ! तोक्यो संख्या
काठमाडौँ /स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको छ।
कोभिड-१९ सं’क्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले भीडभाड कम गर्न र २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको हो।
शुक्रबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गौतमले स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जुलुस लगायत सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बता
अहिले देखिएका सं’क्रमितहरूमा जटिल प्रकृतिको लक्षण देखिएको र संक्रमण दर पनि बढेर गएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
उनले भने,‘अहिले जुन भीडभाड भइरहेको छ कति ठाउँमा, अब त्यो भीडभाड पूरै बन्द गर्नुपर्छ। एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर २५ जनाभन्दा कम मान्छे दूरी कायम गरेर भेला हुन सकिन्छ। त्यो पनि अब कति दिनपछि नगर्नुस् भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तो स्कुल, कलेज, सिनेमा हल पार्टी प्यालेस, भेला, जुलुस, भीडभाड, ठूलाठूला भेला सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। यो किन भनेको हो भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु।
अहिले छिटपुट रूपमा कोभिड-१९ का केस गएको महिनाको भन्दा बढेर गयो। अस्पतालमा आइसियुमा बिरामीहरू धेरै नै भर्ना भइसकेका छन्। त्यसबाट के बुझिन्छ भने अहिले अब कोरोनाको ग्राफ उकालो लाग्यो। अब बढ्न थाल्यो। अब हामीले ध्यान दिएनौं भने फेरि सं’क्रमण एकदम बढेर जान्छ।’
मेडिकल सामग्री लिन चीन गएको जहाजको ल्यान्ड भएको ४ घन्टा बित्दा पनि ढोका खुलेन